Filtrer les éléments par date : jeudi, 01 octobre 2020
jeudi, 01 octobre 2020 21:44
Pilo kely: "Voatabia", "Hisy", "Ravitoto', teny ratsy be aminay, fa "tipaka am-pory" raha normal
Nitandrigneeeeeeeesako hira igny, za sur fa koragna nivolagna "olo be werawera, mpampijaly vahoaka, be kolikoly, antsorita bongan'azy", igny na censuré kabaro igny.
Mbo lavitry malagasy ofisialy itambarana ity ein
Ohatra tsotra raha ity fehezan-teny ity no adika:
"Hisy vehivavy ividy voatabia ho tonga any aminareo"
Traduction langue officielle: "Une femme va acheter des tomates chez vous"
Traduction langue régionale: "Le vagin d'une femme achète un testicule chez vous"
Zany tsy midika hoe mahazo mihira n'importe quoi, na magnasaha na miteny ratsy ny mpihira, fitaizana vahoaka ilaina.
jeudi, 01 octobre 2020 21:34
Tsaramiarina - Morafeno Boana: May kilan'ny afo ny tanàna, olona iray maty, 200 traboina
Nitrangana haintrano goavana tao Tsaramiarina, Fokontany Morafeno, Kaominina Morafeno Boana, Distrikan’i Maevatanana ny tolakandron’ny alarobia 30 septambra 2020.
May kila hotohoton’ny afo ny tanàna. Olona iray no namoy ny ainy nandritra izany, ary roanjato mahery no traboina.
Miantso vonjy amin’ny fitondram-panjakana sy izay malala tanana ireo traboina fa lasa lavenona avokoa izay zavatra nohariana an-taonany maro sy ny ankamaroan’ny vokatra ary koa lelavola mitentina 04 tapitrisa Ariary.
jeudi, 01 octobre 2020 21:31
Mandoto: Hampiantrano ny fankalazana ny Andro manerantany ho an’ny sasa-tanana amin’ny savony
Hatao ao an-tananan’i Mandoto, renivohitry ny Distrikan’i Mandoto, Faritra Vakinankaratra ny fankalazana ny Andro manerantany ho an’ny sasa-tanana amin’ny savony, ny 15 oktobra 2020.
jeudi, 01 octobre 2020 21:24
Malagasy nihitsoka tany ivelany: Nisy 52 niasa tany Liban tonga androany
Mpiasa malagasy miisa 52 niasa sy nonina tany Liban no tonga an-tanindrazana teny Ivato androany. Tafiditra anatin’ny fanatanterahana ny fampodiana ireo teratany Malagasy tavela tany ivelany ity.
Manaja fepetra ara-pahasalamana izy ireo. Natao fitiliana PCR izy ireo nialohan’ny niainga tany Liban. Tsy maintsy natao fitiliana PCR ihany koa teny ampahatongavana teny Ivato androany, ary miandry ny valin’ny fitiliana any amin’ny toerana nanokanam-ponenana azy ireo.
jeudi, 01 octobre 2020 17:05
Nosy Be: Mpizahatany 114 nentin’ny fiaramanidin’ny Ethiopian Airlines
Nisokatra androany ny lanitr’i Madagasikara rehefa nikatona nanomboka ny 19 marsa 2020 misasak’alina noho ny fisian’ny valanaretina coronavirus.
Fiaramanidin’ny kaompania Ethiopian Airlines no nisantatra izany.
Nigadona androany tolakandro tao amin’ny seranam-piaramanidina Fascene Nosy Be ny fiaramanidin’ny Ethiopian Airlines nitondra mpizahatany miisa 114. Niainga avy any Addis Abeba Etiopia ireto farany.
Araka ny fanazavan’ny minisitry ny fitaterana sy ny fizahantany ary famantarana ny toetr’andro Randriamandranto Joel, dia manana tapakila mandroso sy miverina avokoa ireo mpandeha ekena hiditra eto Madagasikara.
jeudi, 01 octobre 2020 17:02
Mpampianatra FRAM amin’ny Lycée: Homen’ny Fanjakana fanampiana taorian’ny Covid-19
Handray an-tanana ny fanampiana ireo mpampianatra FRAM eny anivon’ny Lycée ny fanjakana mba hampitovy lenta ny fitantanana ireo mpampianatra rehetra miasa eny anivon’ny sekolim-panjakana manoloana ny fiantraikan’ny valanaretina.
Raha ny fantatra dia efa nisy ny fanampiana nomen’ny tetikasa PAEB ho an’ireo mpampianatra FRAM eny anivon’ireo sekoly garabola, ny ambaratonga voalohany ary ambaratonga faharoa manoloana ny fiantraikan’ny valanaretina Covid-19.
jeudi, 01 octobre 2020 16:58
Mpiasam-panjakana: Miisa 7 547 ireo nandray karama nefa tsy hita hoe mankaiza
Misy mpiasam-panjakana tsy hita hoe aiza no miasa nefa mandray karama tsy tapaka.
Nohamafisina nandritra ny filankevitry ny minisitra omaly fa ireo olona nandray vola nefa tsy miasa na tsy voaisa ho mpiasam-panjakana ara-dalàna fa nandray volam-panjakana dia tsy maintsy mamerina izany avokoa, miampy ny fanesorana azy ireo anaty lisitra ary koa ny fanasaziana.
Miisa 7 547 izy ireo ary mbola eo ampanamarinana ny momba azy ireo ny ao amin’ny fitantanam-bola ankehitriny.
jeudi, 01 octobre 2020 16:55
Centre d’Infectiologie Charles Mérieux: Nomen’ny fanjakana fanalefahan-ketra
Nomen’ny fanjakana fanalefahan-ketra ny Centre d’Infectiologie Charles Merieux eny Ankatso izay nanafatra fitaovana ilaina amin’ny laboratoara fitiliana sy fitaovam-piarovana ho entina miady amin’ny valanaretina Covid-19.
jeudi, 01 octobre 2020 16:13
Kere any atsimon’ny Nosy: Hidina hitondra ny fanampiana any ny Filoham-pirenena
11 amin’ireo 18 Kaominina iharan’ny Kere any atsimon’ny Nosy izay any amin’ireo toerana tena saro-dàlana no tena sahirana ankehitriny ka hitondrana fanampiana sy vonjy aina avy hatrany araka ny tatitry ny filankevitry ny minisitra natao omaly.
Voalaza koa fa hidina any hitondra ny fanampiana entin’ny fanjakana ny Filoham-pirenena, ary hanamafy sy handamina ireo tetikasa maharitra sy foto-drafitrasa iadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo any amin’ny faritra atsimo.
jeudi, 01 octobre 2020 15:52
Fanafihana mitam-basy: Lasan’ireo jiolahy ny vola 15 tapitrisa Ariary
Nitrangana fanafihana mitam-basy taty Antsirabe renivohitr’i Vakinankaratra ny alin’ny Alarobia hifoha ity Alakamisy 01 Oktobra ity.
Tokantrano iray ao Soamahatamana, Fokontany Verezambola no lasibatra. Toerana iray somary mivoakan’ny tanànan’Antsirabe amin’iny ilany atsimo iny izany.
Tsy voavohan’ireo jiolahy, izay nanao andiany maro, ny varavaran’ilay trano notafihina ka ny “grille de protection” teo amin’ny varavarankely no nesorin’izy ireo, ary teo no nidirany.